Manampy orinasa LinkedIn Araho ny bokotra | Martech Zone
Talata, Febroary 28, 2012 Alahady 15 Janoary 2017 Douglas Karr
Tena tiako ny zava-misy fa lasa sehatra media sosialy miorina amin'ny orinasa i LinkedIn. Ho an'ny mpanjifa sy mpivarotra orinasa amin'ny orinasa (B2B), ny fanarahana ireo orinasa sosialy ao amin'ny LinkedIn dia afaka manome anao fampahalalana tsara momba ny vokatra, serivisy ary fampahalalana momba ny indostria. Rehefa mahazo vintana ianao dia tokony hampidina ny rindranasa finday LinkedIn ihany koa - ny fandefasana tsara ny algorithm azy ireo hamantarana ireo vaovao sy lohahevitra ambony ao anatin'ny tamba-jotra misy anao dia miavaka.
LinkedIn dia manolotra bokotra iray hanarahan'ny mpikambana ny orinasanao:
Atombohy fotsiny fanoratana ny Anaran'ny Orinasanao amin'ny mpamorona bokotra ary safidio avy amin'ny dropdown feno-auto. Raha tsy eo ianao dia mety mila mamorona mombamomba ny orinasa… tena atoro anao!
Azonao atao ny mahita ny bokotra miasa eo amin'ny anay masoivoho media sosialy toerana. Aza hadino ny manaraka anay!
Tags: LinkedInorinasa Linkedindeveloper developerlinkin manarakabokotra manarakalinkin amin'ny toro-hevitra
Authorship Plugin ho an'ny WordPress